The phone LG, sida G2 LG, waxaad la kulmi Raaxo sawir ogolaanaysaa. Haddii aad jeclaan sawiro la phone LG toogtay, waxaa laga yaabaa in aad rabto in aad iskaan sawirada kombiyuutarka. Waa hagaag, sawiro ka phone LG gudbaayo computer ma aha shaqo adag. In qayb hoose, waan ku qor 2 jid oo sahlan, oo aad u iskaan karo oo ay helaan hab aad doonayso.
Xalka 1: sawirada Transfer ka phone LG xisaabinta fudud cable USB
Way fududahay. Dhammaan waxa aad u baahan tahay waa cable USB ah.
Marka hore, furaysto ee cable USB Android in ay ku xidhmaan telefoonka LG in kombiyuutarka. Computer ayaa isla goobtii lagu ogaan doonaa telefoonka LG.
Markaas, waxaad tagtaa My Computer iyo furi drive ee LG. Sida aad ka arki, sawiro ah in aad ku soo gani badbaadiyey ee folder DCIM.
Markaas, furo folder iyo jiididda jeedi photos jecel in ay kombiyuutarka.
Waxay u egtahay fudud, sax? Si kastaba ha ahaatee, waxaad iska indho laga yaabaa in xaqiiqda ah in sida caadiga ah waxaa tahay sawiro dheeraad ah oo ku saabsan telefoonka LG, oo ayan ku jirin kuwa aad u toogtaan. Photos badanaa waa kuwo natiijada ciyaaro barnaamijyadooda ama raadinaya internet ku saabsan telefoonka LG, kuwaas oo si fudud la iska indho tiray. Xitaa haddii aad iyaga ogaadaan, waa wax sahlan ma aha in ay u helaan, ka fiirsaneysa inay fayl aad u badan oo ku saabsan telefoonka LG. Sidaa awgeed, waxaa suurtagal ah in la helo oo nuqul ka photos si aad kombiyuutarka sida ugu fudud ee kuwa aad u tooganayaan?
Dabcan. Halkan waa hab fudud oo aad raaci karaan. Si kastaba ha ahaatee, waxaad u baahan tahay caawimaad ah. Taasi waa Wondershare MobileGo for Android (Windows) ama Wondershare MobileGo for Android Pro (Mac) . Qalabkan waxaa loo arkaa in ay tahay tababare awood leh desktop Android, taas oo laga baarayo oo dhan sawiro ku saabsan telefoonka LG oo iyaga ku biiro computer ee yaalla.
Xalka 2: Download sawiro ka phone LG in computer la qalab
Just download iyo rakibi Windows ama Mac version on your computer. Tan iyo markii ay labada qeybood oo ka shaqeeya si la mid ah ilaa xad, halkan, waxaan doonayaa inaan idin tuso tallaabooyinka fudud sameeyo version Windows ah.
Tallaabada 1. Isku phone LG in ay kombiyuutarka
Orod MobileGo for Android barnaamijka kombiyuutarka. Wixii user Windows, waxaad leedahay laba siyaabood oo isku xira. Mid ka mid ah waa in ay furaysto dhamaadka yar oo cable USB galay phone LG ah iyo surin dhamaadka kale kombiyuutarka. Habka kale waa via WiFi. Ka hor inta xiriir WiFi ah, waxaa idinku waajib ah inay dhidibbada u aasto file MobileGo APK ah ee aad taleefan LG hore. Markaas, aad telefoon LG u muuqataa in uu furmo suuqa hoose.
Fiiro Gaar ah: Wixii isticmaala Mac, waxaad ku shuban kartaa cable USB ah oo wuxuu galay in ay ku xidhmaan telefoonka LG si Mac ah. WiFi aan la heli karin in Mac OS.
Tallaabada 2. photos Nuqul ka LG in computer
In galeeysid bidix, guji saddexagalka ee soo socota si ay u Photos . Under category Photo yihiin oo dhan fayl sawir ku saabsan telefoonka LG. Fur mid folder iyo doortaan sawirada aad jeclaan lahaa inay u dhoofiyaan. Markaas, guji dhoofinta . Browse computer ah oo dhigay Ahaado. Markaas, kala iibsiga sawir bilaabmin. Marka ay ka badan, guji Close ama Folder Open si aad u hubiso ka photos dhoofiyo.
Tutorial video wuxuu kuu sheegayaa sida ay u guuraan photos LG in computer
Xagga sare, waa laba siyaabood oo ku saabsan sida loo sawiro ka phone LG wareejiyo computer. Dooro sida aad jeceshahay oo isku day ah oo ay leeyihiin.
Top 10 Google Hadda Maqaallo
> Resource > Android > siyaabo fudud si ay u gudbiyaan Photos ka LG Phone in Computer